Ukufaka i-Redmine 2.4.0 ku-Debian 7 | Kusuka kuLinux
I-Fenriz | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
I-Redmine iyithuluzi lokuphathwa kwephrojekthi elibandakanya uhlelo lokulandela umkhondo wezigameko ngokulandela i-bug. Amanye amathuluzi afakiwe ikhalenda lomsebenzi, amashadi we-Gantt wokumelwa okubonakalayo komugqa wesikhathi wephrojekthi, i-wiki, iforamu, isibukeli sokugcina inguqulo, i-RSS, ukulawulwa kokuhamba komsebenzi, ukuhlanganiswa i-imeyili, njll.
Ukusabalalisa: I-Debian 7
IPostgreSQL V 9.1
Yenza kabusha ukufakwa kwe-2.4. (kugcine kuze kube yilolu suku)
Phinda usebenzise iphakethe le-2.4
Ukusuka lapho imibhalo esemthethweni elethwa yiphakheji iyavula. (RTFM !!!)
Umphumela wekati usesiqondisweni - » http://pastebin.com/ecUB93Hk
Uhlobo lweRuby nalo luhloliwe. Esimweni esinjalo:
Igugu le-bundler lifakiwe, elizosisiza ukufaka amagugu ancike kuphrojekthi.
Kufanele senze i-database ku-UTF-8, kuleli cala postgresql v9.1 isetshenziswa negama: "redmine".
Ngemuva kwalokho wonke amagugu adingekayo afakiwe, kubo kufanele kube kumkhombandlela we-redmine:
Kungaba inkinga lapho ufaka igugu le-nokogiri ngalokhu abakwenzayo:
Ukufakwa kwesudo apt ruby1.8-dev ruby1.8 ri1.8 rdoc1.8 irb1.8 libreadline-ruby1.8 libruby1.8 libopenssl-ruby ruby1.9.1-dev gem install nokogiri
Kungaba nenkinga ngenkathi ufaka i-mysql2 gem. ngalokhu bayakwenza:
Kungaba nenkinga lapho ufaka i-gem pg. ngalokhu bayakwenza:
Kulokhu bekungekho enye inkinga ngokufakwa kwegugu.
Kwenziwa isitolo esiyimfihlo seseshini.
Sakha ukwakheka kwedatha
Sisebenzisa izimvume ezidingekayo.
Sivivinye ukufakwa kwe-redmine
Kule ngxenye sihlola i-redmine:
indawo yokuhlala: 3000
Isivele isebenza. Manje okungahle kulahleke ukulungisa i-SMTP Server futhi shintsha iseva yeWebrick ibe yi-Apache2. Ushintsho lwenziwe, ngoba iseva yeWebrick ekukhiqizeni isebenzisa izinsiza eziningi.
Sifaka i-VirtualHost ku / etc / apache2 / sites-enabled / file
Sifaka i-www.redmine.dominio.com futhi SENZE! Jabulela i-redmine yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukufaka iRedmine 2.4.0 kuDebian 7
Scrot: Isicelo sokuthatha izithombe-skrini noma izithombe-skrini ngokusebenzisa i-terminal